ESI MARA UGBORO OLE RAM NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Kpebie ugboro ole RAM na Windows 7
RAM bụ otu n'ime ihe ngwaike nke kọmputa. Ọrụ ya gụnyere nchekwa na nkwadebe data, bụ nke a na-agafezie na nhazi nke ihe nhazi. Ogologo oge nke RAM, ngwa ngwa ka usoro a na-ewere ọnọdụ. Ọzọ, anyị ga-ekwu banyere otu esi achọpụta ọsọ ọsọ nke modulu nchekwa arụnyere na PC na-arụ ọrụ.
Ịchọpụta ugboro ole RAM
A na-atụle ugboro ole RAM na megahertz (MHz ma ọ bụ MHz) ma gosipụta ọnụ ọgụgụ nke data na-enyefe kwa nkeji. Dịka ọmụmaatụ, otu modul nwere ọsọ ọsọ nke 2400 MHz nwere ike ịnye ma nweta ozi ugboro iri abụọ na abụọ na oge a. N'ebe a, ọ dị mma ịchọta na uru ahụ dị na nke a ga-abụ 1200 megahertz, ọnụ ọgụgụ a na-apụta bụ okpukpu ugboro abụọ. A na-ele nke a anya n'ihi na ibe nwere ike ịrụ ọrụ abụọ ozugbo n'otu oge okirikiri.
Enwere ụzọ abụọ iji chọpụta oke nke RAM: iji ihe omume ndị ọzọ na-enye gị ohere ịnweta ozi dị mkpa gbasara usoro ahụ, ma ọ bụ ngwá ọrụ wuru na Windows. Ọzọ, anyị ga-atụle usoro ịkwụ ụgwọ na ngwanrọ n'efu, yana ịrụ ọrụ na "Iwu iwu".
Dika anyi kwuru n'elu, enwere ugwo oru a kwadoro na nke nweere onwe ya iji kpebie oge ncheta. Ndi otu mbu taa ga - etinye aka na AIDA64, nke abuo - site na CPU-Z.
Usoro a bụ ezigbo ngwakọta maka inweta usoro data - ngwaike na ngwanrọ. Ọ na-agụnyekwa ụlọ ọrụ maka ịnwale ụdị dị iche iche, gụnyere RAM, nke ga-abakwara anyị uru taa. Enwere otutu nhọrọ maka nkwenye.
Gbaa usoro ihe omume ahụ, mepee alaka ụlọ ọrụ ahụ "Kọmputa" ma pịa mpaghara "DMI". N'akụkụ aka nri anyị na-achọ nkwụsị. "Ngwa nchekwa" ma kpughee ya. A depụtara ebe niile modulu arụnyere na motherboard ebe a. Ọ bụrụ na ị pịa otu n'ime ha, mgbe ahụ, Aida ga-enye gị ozi anyị chọrọ.
N'otu alaka ahụ, ịnwere ike ịga na taabụ ahụ "Overclocking" ma nweta data site n'ebe ahụ. Nke a bụ oge dị irè (800 MHz).
Nhọrọ ọzọ bụ alaka. "Board System" na ngalaba "SPD".
Usoro niile a dị n'elu gosiri anyị ugboro ole nke modulu. Ọ bụrụ na imebiga ihe ókè emee, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta oke uru nke oke a site na iji cache na ngwa RAM nyocha.
Gaa na menu "Ọrụ" ma họrọ ule kwesịrị ekwesị.
Anyị pịa "Malite Benchmark" ma chere ka usoro ihe omume mepụta ihe. Nke a na-egosi bandwidth nke ebe nchekwa na ihe ntanetị nhazi, yana nke mmasị nke anyị. Ọnụ ọgụgụ ị na-ahụ ga-abawanye site na 2 iji nweta oge dị irè.
Akụrụngwa a dị iche na nke gara aga n'ihi na a na-ekesa ya n'efu, ebe ọ bụ naanị ọrụ kachasị mkpa. N'ozuzu, e mere CPU-Z ka ị nweta ozi gbasara usoro nhazi nke etiti, mana o nwekwara ihe dị iche iche maka RAM.
Mgbe ịmalitere usoro ahụ, gaa na taabụ ahụ "Nchekwa" ma ọ bụ na mpaghara obodo Russia "Nchekwa" ma lee ala "Oge DRAM". Ọnụahịa ahụ a kapịrị ọnụ ga-enwe ugboro ole RAM. A na-enweta ihe ngosi dị irè site n'ịba ụba site na 2.
E nwere usoro ọrụ na Windows WMIC.EXEna-arụ ọrụ naanị na "Iwu iwu". Ọ bụ ngwá ọrụ maka ijikwa sistemụ arụmọrụ na-enye ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji nweta ozi gbasara ngwaike ngwaike.
Anyị na-amalite njikwa maka nnọchite onye nchịkwa. Ị nwere ike ime nke a na menu "Malite".
More: Ịkpọ "Iwu Iwu" na Windows 7
Kpọọ ọrụ ahụ ma "jụọ" ya iji gosipụta ugboro ole RAM. Iwu ahụ bụ:
wmic memorychip nweta ọsọ
Mgbe ịpị Tinye Ihe bara uru ga-egosiputa anyi ugboro ole nke otu modulu. Nke ahụ bụ, na nke anyị, e nwere mmadụ abụọ n'ime ha, onye ọ bụla na 800 MHz.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịhazi ihe ọmụma, dịka ọmụmaatụ, iji chọpụta ebe oghere mmanya ahụ dị na mpaghara ndị a, ịnwere ike ịgbakwunye iwu "ngwaọrụlocator" (otu na-enweghị ohere):
wmic memorychip nweta ọsọ, devicelocator
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịchọta ugboro ole nke modul RAM dị mfe, ebe ọ bụ na ndị mmepe kere ihe niile dị mkpa maka nke a. Ngwa ngwa na n'efu ọ nwere ike ime ya site na "Iwu Iwu", na ụgwọ ọrụ ga-enye nkọwa zuru oke.